Mid ka mid ah Midnimada Midaysan wuxuu raadiyaa Agaasimaha Horumarinta (Washington, DC) - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
[icon name = ”share” class = ”” unprefixed_class = ””] Wixii macluumaad dheeraad ah iyo si aad u dalbato, booqo bogga Midnimada Midaysan.
Midnimada Midaysan (OCU) waxay jebisaa wareegyada rabshadaha waxayna dhistaa naxariis, bulshooyin caafimaad qaba iyada oo loo marayo awoodda isbeddelka ee muusikada, farshaxanka, iyo waxbarashada nabadda. Waxaa la aasaasey sanadkii 2000 kadib toogashadii isku xigxigey ee ka dhacey Washington, DC, OCU waa dadaal wada shaqeyn ah oo udhaxeeya barayaasha, farshaxanada, iyo xirfadlayaasha caafimaadka ee loogu tala galay kahortaga rabshadaha iyo hagaajinta natiijooyinka nolosha dhalinyarada iyo qoysaska. Iyada oo ku saleysan iskuulada ku yaal guud ahaan DC, waxaan ku tababbaraynaa jiilka soo socda ee hogaamiyaasha akhriska iyo qorista shucuurta bulshada, muujinta farshaxanka, iyo isbadalka isku dhaca oo aan ku taageerno inay u abuuraan isbadal bulsho oo wanaagsan iyo bogsiin bulshada.
Isaga oo la socodsiinaya isla markaana si dhow ulashaqeynaya Maareeyaha Maamulka iyo Agaasimaha Fulinta, Agaasimaha Horumarinta ayaa ka shaqeyn doona sameynta iyo hirgalinta qorshe uruurinta iyo kobcinta sanadlaha ah ee lagu taageerayo jihada istiraatiijiyadeed iyo miisaaniyadda sanadlaha ah ee ururka isla markaana lagu hogaaminayo dadaalada horumarineed ee ururka, iyadoo la ballaarinayo saameynta ururka. .
Waajibaadka waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn:
Qor, ururi, soona gudbi deeqaha iyo warbixinnada deeqaha.
Diiwaan geli, samee, oo ilaali deeqda saxda ah iyo tan ugu dambeysa iyo diiwaangelinta lacag ururin iyo raadinta Salesforce.
Ururinta iyo Horumarinta Ganacsiga:
Lasocodsiinta iyo qiimeynta dhamaan lacag aruurinta iyo howlaha horumarinta ganacsiga lana maareeyo waqtiyada si loo hubiyo in hadafyada lacag aruurinta la gaaro.
Hirgelinta qorshooyinka lacag ururinta iyo horumarinta siyaasadaha iyo habraacyada kooxda horumarinta iyadoo la raacayo mabaadi'da lacag ururinta anshaxa iyo la jaanqaadida qiyamka OCU.
Si joogto ah u qiimee barnaamijyada OCU ee ay bixiyaan iyo ku xirnaanshaha fursadaha maaliyadeed ee cusub iyo kuwa soo ifbaxaya iyo dadaallada tooska ah ee lacag ururinta loogu wajahayo ujeedooyinkaas.
Maalgalinta cilmi baarista iyo fursadaha abuurista dakhliga hal abuurka ah iyo u adeegida sida qofka xudunta u ah horumarinta soo jeedinta macaamiisha mustaqbalka iyo beerashada deeq bixiyeyaasha.
Inay hormood ka noqoto qorshaynta iyo fulinta dhacdooyinka lacag ururinta iyadoo lala kaashanayo xubnaha kale ee kooxda OCU.
Aqoonsiga iyo horumarinta shirkadaha, bulshada, iyo rajooyinka shaqsiyadeed ee mudnaanta ururinta ururinta.
Kormeerida iyo maaraynta keydka macluumaadka deeqbixiyaasha (Salesforce) iyo hubinta duubista saxda ah iyo waqtiga ku habboon.
Wakiil uga noqo OCU kulamada lala yeesho maalgeliyeyaasha, kuwa maalgelin kara, iyo daneeyayaasha ka baxsan.
Shaqaalaha iyo Maamulka Tabaruca:
Markii aan la tashaday Maamulaha Maareynta, iyo Maareeyaha Hawlgallada shaqaalaysiinta, wareysiga, iyo xulashada shaqaale horumarineed oo aqoon wanaagsan leh, oo ay ku jiraan Associate Development, la-taliyayaal, saaxiibbo, iyo layliyo.
Maamul, toos, oo mas'uul ka ahaw kooxda horumarka, oo ay ku jiraan hagista shaqaalaha, saaxiibbada, iyo layliyeyaasha horumarinta qorshooyinka shaqada ee buuxiya mudnaanta ururka iyo sameynta dib u eegista shaqaalaha.
Ku taageer Agaasimaha Fulinta inuu si wax ku ool ah uga hawl galo ugana faa'iideysto dadaalka lacag ururinta ee Golaha iyo Golaha Hoggaanka.
Si dhow ula shaqee Golaha Hoggaanka si loo fududeeyo munaasabadaha iyo istaraatiijiyadaha lacag-ururinta ee laba-sanadlaha ah.
Isgaarsiinta iyo Gaarsiinta:
Toos oo maamul beerista xiriirka lala yeesho shakhsiyaadka ku deeqa adoo u diraya fariimo, shirar beerashada weji-ka-weji beerashada, fursadaha kaqeybgalka bulshada, iyo habab kale oo hal abuur leh si loo dhiso loona ilaaliyo xiriirada.
Dusha kala soco abuurista iyo qaybinta waqtiga ee warbixinnada saamaynta saddex-biloodlaha ah, warbixinnada sanadlaha ah, ololaha bixinta dhammaadka sannadka, iyo wada-xiriirka kale ee shakhsiyaadka ku deeqa.
Hubi wax soo saar tayo leh iyo qaybinta qalabka isgaarsiinta (ha ahaato khadka tooska ah iyo daabacaba), oo ay ku jiraan qoraallo, joornaalada billaha ah, warbaahinta bulshada iyo cusbooneysiinta websaydhka si loo taageero howlaha lacag ururinta.
Iyo waajibaadka kale ee loo baahdo.
Khibrad ugu yaraan 6 sano ah oo ka shaqeysa ama la macaamil la'aan ama ganacsi lacag ururin iyo horumarin.
Shahaadada Masterka oo diirada saareysa horumarka ama mowduuc khuseeya ama khibrad shaqaale oo u dhiganta ayaa si xoogan loo door bidaa.
Ballanqaadka iyo fahamka himilada Midnimada Midaysan, oo ay ku jirto faham adag oo ku saabsan doorka ay waxbarashada iyo farshaxanku ka ciyaari karaan isbeddelka bulshada.
Xirfadaha wada xiriirka, hadalka, iyo qoraalka oo heer sare ah.
Fiiro gaar ah oo si faahfaahsan u faahfaahsan.
Awood u leh inuu dhexgalo jawaab celinta daneeyayaasha badan.
Awood la caddeeyey oo lagu dhisi karo laguna ilaalin karo isku xirnaan wax ku ool ah oo wadashaqeyn lala yeelanayo shakhsiyaad ka soo kala jeeda asallo kala duwan oo ay ku jiraan asxaabta, xubnaha bulshada, mutadawiciinta, ka-qaybgalayaasha barnaamijka, iyo deeq-bixiyeyaasha.
Astaamaha shakhsi ahaaneed ee qaan-gaadhka shucuurta, is-hoosaysiinta, anshaxa shaqada ee xoogga badan, iyo dabeecadda is-duub-gacmeedyada.
Aqoon u lahaanshaha nidaamyada keydka macluumaadka, shabakadaha bulshada ee internetka, iyo barnaamijyada lacag ururinta; khibrad u leh Salesforce iyo Mailchimp si adag ayaa loo door bidaa.
Taariikhda bilowga iyo magdhowga
Taariikhda bilowga ah ee la saadaaliyay waa ASAP. Magdhowgu wuxuu u dhigmaa khibrad u dhexeysa $ 74,000-82,000. Si aad u dalbato, fadlan soo gudbi warqad dabool ah oo qeexaysa sababta aad u dareemayso inaad ku habboonaan lahayd booskan iyo dib u bilaabista [emailka waa la ilaaliyay] iyada oo la socota "Codsiga Agaasimaha Horumarinta" ee khadka maadada. Codsiyada waxaa loo aqbali doonaa qaab duudduuban.
Midnimada Midaysan waa fursad loo siman yahay, shaqo-bixiye xaqiijin xaqiijin ah waxayna dhiirrigelisaa codsiyada ka imanaya dadka midabka leh, haweenka, si kala duwan loo soo celiyo, LGBTQIA, iyo kooxo kale oo taariikhi ahaan lagu takooray.
November 2, 2018 Warar & Muuqaal 0
Ku noolaanshaha ummad dareensan kala qaybsanaan maalin kasta oo dhaaftaa waxay ku yeelan kartaa culays shucuur ah. Laakiin dhibco dhalaalaya waqtigan buuqan ayaa jira: Barnaamijka Waxbarashada Nabadda ee Louisville, KY waa mid ka mid ah. Hay'addan - oo bilaabatay 35 sano ka hor oo hadda ka kooban 88 iskuul iyo 67 goobood oo bulshada ah oo shabakaddooda ka mid ah - waxay khibrad waxbarasho u fidisaa dhallinyarada iyo dadka waaweyn ee gacan ka geysta yareynta rabshadaha. [sii wad akhriska…]